Filoha frantsay, Emmanuel Macron : “Olom-panjakana lehibe ny Pr Zafy Albert” | NewsMada
Filoha frantsay, Emmanuel Macron : “Olom-panjakana lehibe ny Pr Zafy Albert”
Nandefa taratasy fiaraha-miory ho an’ny filoha Rajaonarimampianina, ny 18 oktobra lasa teo, ny filohan’ny Repobika frantsay, Emmanuel Macron, noho ny fodiamandrin’ny filoha malagasy teo aloha, ny Pr Zafy Albert.
“Tao anatin’ny alahelo lalina no nandrenesenako ny fodiamandrin’ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara teo aloha, Atoa Zafy Albert. Namoy olom-panjakana lehibe ny firenenareo”, hoy ny fitsapana alahelo.
Fitsaboana ny fiofanana azony, ary izy no filoha voalohany tamin’ny Repoblika III. Nanana ny anjara toerana lehibe eo amin’ny fiainana politika eto Madagasikara izy. Nanana fahendrena lehibe izy, tsy nitsahatra niaro ny soatoavina demokratika ary nanome lanja ny tena fampihavanam-pirenena, indrindra tamin’ny krizy politika 2009.
Amin’izao fisaonam-pirenena izao, maneho ny fiaraha-miory ny filoha frantsay, ary miangavy ny hampitana izany amin’ny fianakavian’ny mana-manjo sy ny vahoaka malagasy.
Tsiahivina fa efa nandefa fitsapana alahelo ihany koa ny ambasadaoron’i Frantsa eto Madagasikara, Véronique Vouland-Aneini, izay nilaza fa filoham-panjakana nanome lanja ny fanjakana tan-dalàna sy ny fananana iombonana ny Pr Zafy Albert. Mpiaro mafana fo ny demokrasia izy, hitoetra ho loharano tolo-kevitra ho an’ny taranaka mifandimby ny lova navelany.